Home Wararka Al-shabaab oo saaka mudda kooban qabsaday magaalada Balcad
Al-shabaab oo saaka mudda kooban qabsaday magaalada Balcad
Dagaallamayaal ka tirsan Xoogagga Al-shabaab ayaa saaka mudda kooban qabsaday magaalada Balcad ee Gobolka Shabeellada dhexe. Al-shabaab oo subaxnimadii hore ee saaka weerar ku qaadday degmada Balcad ayaa saacado gacanta ku hayay magaalada sida ay xaqiijiyeen dad lagu kalsoonyahay.
Ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM ayaa isaga baxay Balcad kadib dagaal khasaare dhaliyay oo dhexmaray iyaga iyo Al-shabaab. Sidoo kale weli faahfaahin lagama helin khasaaraha ka dhashay dagaalka Balcad ku dhexmaray Al-shabaab iyo Ciidamada dowladda oo ay weheliyaan AMISOM.
Previous article[Video] Gen: Odawaa oo heegan buuxa geliyey ciidanka xoogga dalka
Next articleMaraykanka oo Farmaajo ku amray inuu taageero Shirka Golaha Wadatashiga Qaran
MW Farmaajo oo ka shaqeynaya in Somalia mar kale gasho dagaal...
Faahfaahin dheeri ah , Hoobiyayaashii laga garaacay Muqdisho.